Factory semitrailer entana | Mpanamboatra sy mpamatsy semitrailer China
3 Axle Heavy Duty Machines Transporter Low Bed / Lowboy / Lowbed Semitrailer
Inona no tombony azo amin'ny tranofiara semi-fisaka ambany fandriana ambany? Semi-tranofiara fisaka sy ambany dia ny tranofiara malaza indrindra ho an'ireo mpamily kamiao lehibe, izay mitondra fahafaha-manao lehibe amin'ny tranofiara. Ireo mpamily mahalala tsara ity tranofiara ity dia mahafantatra azy tsara. Ka inona ny tombony azo avy amin'ny semi-tranofiara fisaka sy ambany? 1.Flat ambany fisaka tranofiara miorina amin'ny tranofiara lehibe dia ambany, ambany afovoan'ny hery misintona, hiantohana ny fitoniana amin'ny fitaterana, mety amin'ny fitondrana ny karazana milina fananganana, la ...
Crawler crane transport front loading 60 taonina gooseneck azo esorina ambany fandriana semi trailer
Azo ampiharina amin'ny fitaterana ny milina fitrandrahana injeniera, crawler
fiara, singa sy fitaovana mavesatra andraikitra;
Izy io dia mandray endrika gooseneck hydraulic + pneumatic, miaraka aminy
HONDA lasantsy maotera lasantsy, tohatra miakatra eo aloha, famokarana mandroso
teknolojia sy fitaovana fanandramana tonga lafatra, izay manome antoka mahomby ny
ny firafitry ny vokatra ankapobeny dia mitombina, ny afovoan'ny hery misintona dia ambany, matanjaka ny fahaiza-mitondra ary matoky ny zava-bita;
40ft 3 axle flatbed / rindrina / fefy / kamio fiara mpitatitra fiara fitaterana kaontenera
Azo ampiharina amin'ny fitaterana kaontenera, faritra lehibe, fivarotana, lehibe
singa sy fitaovana; Ny endrika dia novelabelarina, mandray teknolojia famokarana mandroso sy tonga lafatra
fitaovana fanandramana hanomezana toky ny firafitra mety sy azo itokisana
fampisehoana ny vokatra;
Fefy tsato-kazo avo lenta China 3 Cargo Semi Trailer amidy
Izahay dia manolotra anao hatrany hatrany ny serivisy ho an'ny mpanjifa fatratra indrindra ary ny endrika isan-karazany sy ny endriny misy fitaovana tsara indrindra. Ireo andrana ireo dia misy ny fisian'ny volavola namboarina miaraka amin'ny hafainganam-pandeha sy ny fandefasana ny fivarotana mafana ho an'ny 3 Axle Fence Cargo Transport Stake Semi Trailer any Shina. Azafady mba andramo maimaim-poana hifandray aminay amin'ny zava-misy misimisy kokoa.
Fivarotana mafana ho an'ny tranofiara Utilia China, tranofiara semi, ny fanatontosana anay dia naondrana tany amin'ny firenena sy faritra 20 mihoatra ny loharano voalohany miaraka amin'ny vidiny ambany indrindra. Mandray an-tanana ny mpanjifa avy any an-trano sy any ivelany izahay tonga mba hifampiraharaha aminay.